Kulan Xasaasi ah oo ay Muqdisho ku yeesheen Saddex Madaxweyne oo hore u soo maray Soomaaliya + SAWIRRO | HalQaran.com
Kulan Xasaasi ah oo ay Muqdisho ku yeesheen Saddex Madaxweyne oo hore u soo maray Soomaaliya + SAWIRRO
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka Soomaaliya, oo kala ah, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gurigiisa ku booqday Madaxweynihi hore ee dalka mudane Cali Mahdi Maxamed.
Shariif iyo Xasan, ayaa la yeeshay kulan looga hadlaayay Xaaladda dalka iyo xayiraadii dhawaan lagu sameeyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale, kulankaan ayaa waxaa qeyb ka ahaa xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Maalmihii ugu dambeeyay, waxaa Caasimadda Muqdisho ka socday kulamo kala duwan oo looga hadlaayay Xaaladda Siyaasadeed ee dalka.
kulan xasaasi ah
Saddex madaxweynayaal hore Soomaaliya